रत्‍नपार्क लाइभ !
सिपी अर्याल (CP Aryal)﻿
माघ महिना। बिहान सबेरैको ठिहिर्‍याउने जाडो। घण्टाघर बासेर छ बजेको जानकारी दियो। अब पनि रत्नपार्कलाई रातभरीको थकानबाट नतङ्ग्रीइ सुख्ख छ र!
'टिर्लिङ! टिर्लिङ!! टिर्लिङ!!!' निला ओठ थररर पार्दै यो जाडोमा साइकलको घन्टी बजाउँदै मुस्कुराउँदै कुद्दै छ हकर केटो, भलै उसको साइकल–क्यारिअरका पत्रिकाका निराश खबर पढेपछि मान्छे नमुस्कुराउला। स्कुस, मुला, धनियाँ, काउली र गोलभेँडा खर्पनमा बोक्दै हिँडेका ज्यापु दाईको सर्‍याक–सर्‍याक हिँडाइ। कलेज पुग्न हतारिएका युवायुवती र उनीहरूलाई गन्तब्यमा पुर्‍याउन कस्सिएका मोटर। थर्मसमा चिया बेच्दै हिँडेकी दिदीको उत्साहसँगै रत्नपार्क उज्यालिँदै छ। दिनभरी लाखौँ मान्छेलाई आफ्नो छातीको बाटो हुँदै काठमाण्डौँ चाहार्न सघाएको यो रत्नपार्कले यसरी सुरु भएको चर्यामार्फत् मानिसहरूलाई फेरि अर्को सिसिफस दिन देखाइदिने हतारमा छ! यहाँ घामले पहिलो झुल्को पोखेपछि त्यसलाई मधुरो जूनले प्रतिस्थापन नगर्दासम्म अनेक दृश्यहरूको साक्षी बन्दा हुने रमाइलोको बयान के पो गरिसाध्ये र!
बिहानको नौ बज्यो। आफ्नो छातीलाई म्याराथन ग्राउन्ड बनाइदिने ध्याउन्नमा लागीसकेको छ रत्नपार्क। घरघरमा रातभरी थन्क्याइएका मोटर र भटभटेहरू रत्नपार्क हुँदै काठमाण्डौँभरि छरिन थाले। कलेज जानेलाई क्लास छुट्ने रन्को। जागीरेलाई छुट्टै भ्याइनभ्याइ। कति बज्यो, त्यो जान्न होला आफ्नो हातैमा रहेको मोबाइलस्त्रि्कनमा लगभग पाँच सेकेन्डमा दसौँपटक हेर्छे एउटी ठिटी। अफिस हिँडेकीहोली। काममा पुग्न ढिला भए बोस रन्केला।
जेलिफिस जस्तो समयलाई समाउन कहाँ पो सक्छ र मान्छे! तरपनि यत्न गर्दैथिए सबै।
बगैँचाभित्र छिर्ने गेटैमा बिस–बाइस बर्षे जस्तो लाग्ने एउटी युवती गाजलु आँखाभरी आँसु सँगालेर बसेकी छ। उसको निराश मुडमा त्यो आँसु खुब सुहाएको छ। त्यसैले होला आँसुलाई भुइँमा तप्कने मौकै नदिएकी। मानिसहरू ट्वालट्वाल्ती हेर्दैछन् उसलाई। बिचरी के पिर परेर रोइरहेकी छ!
आकाशे पुलबाट हिँडे तपाईँ शतप्रतिशत सुरक्षित, नहिँडे शतप्रतिशत असुरक्षित। धेरै ठाउँमा यस्ता होर्डिङबोर्ड–सुचना टाँगिदिएकै छ ट्राफिकले। भोटाहिटीको आकाशेपुल छेउमै उभिएको छ। तर पनि बाटैबाट हिँड्नुपर्ने छुच्चाहरूलाई! एउटा मानिस : हेर्दा टाइसुट लाएको, पढेलेखेको जस्तो देखिन्छ। तर पनि व्यस्त बाटोबाटै खुरुखुरु हिँड्नुपर्ने! लौननी! अर्को एउटा भुसतिघ्रेलाई त्यो निलो माइक्रोले झण्डै परमधाम पुर्‍याएको।
'ओए पृथ्वीलोक बसेर पुग्यो!!!' माइक्रो ड्राइभरले गाडीबाटै उसलाई झपार्छ। खुच्चीङ्! जानेकाले पनि यस्तो गरिदिने?
आकाशको उकालो लाग्दै गरेको सुर्यले रत्नपार्कलाई न्यानो बनाउँदै छ। चौरमा एउटा समुह देखिन्छ। जादु पो देखाइँदै रैछ। जादु हेर्न बसेका मानिसहरूतिर आँखा जान्छ।
'दाई ह्याँ के गर्न लाका हुन्?' फुस्रो अनुहारको एक युवकले जवाफ दिन्छ 'जादु देखाउन लाछ।' प्र्रश्न सोध्नेतिर नहेरी टाउको उचाली उचाली जादु हेर्दै छ ऊ।
'तपाईँ के काम गर्नुन्छ नि?' बल्ल उसले मतिर हेर्छ, 'काम छैन, बेरोजगार छु, दिनभरी ह्याँ आइ समय काटीराछु।'
अब ऊ अर्कैछेउतिर हिँड्छ। अरू प्रश्नको झटारो खेप्ने झन्झटबाट मुक्त हुन चाहेको न थियो!
पेटीमा बस्ने भविष्यद्रष्टाहरू अर्का पात्र हुन् रत्नपार्कको शोभा बढाइदिने। धेरैजसो काला अनुहारका भारतीयजस्ता देखिन्छन्। कोही यतैका पाका बाजेहरू पनि छन्। एउटा बाजेसँग गफिन मन लाग्यो।
'बाजे म हात हेर्न आको हैन।'
'किन आको त?'
Posted by CP Aryal (सिपी अर्याल) at 11:19 AM